Chii chinonzi The News Spy - Nezvedu
Kugamuchirwa ku The News Spy - Kutanga munzira yako kune Kubudirira Kwemari
Nezve The News Spy
Pakanga paine nguva apo cryptocurrencies yaive iine hasha mumisika yepasirese yezvemari. Munguva yekukwira kweiyo cryptocurrency boom, yekutanga mari yemari yepasirese, Bitcoin yakanga yasvika panosvika madhora zviuru makumi maviri pamagumo a2017. Imwe misika yemakristpto yemari yakasvikawo munhoroondo dzakakwirira panguva ino.
Mhedzisiro yacho yaive yekuti vazhinji vekutanga vatyairi muBitcoin uye nemamwe ma cryptocurrencies vakapedzisira vava vapfumi zvakanyanya. Vazhinji vavo vakave vanozvigadzira mamirionea panguva ino. Nekudaro, mushure mekusvika pakakwirira, musika wadzoka pasi uye wakasangana nekushomeka kukuru kubvira ipapo.
Kunyangwe kusagadzikana zvakanyanya kuchireva njodzi yekurasikirwa kunogona zvakare kupa mikana yekuwana purofiti yakakura. Naizvozvo, iwe hauna kupotsa mukana wako wekuwana muhombe purofiti kubva pamari yemadhora kana zvikaitika kuti hauna kuve mumwe weava vatengesi vekutanga. Nguva chaiyo yekutenga nekutengesa mumusika zvinoita kuti iwe uwane mari yakawanda panguva yemamiriro ezvinhu emusika asina kugadzikana.
The News Spy yakagadzirirwa kutendera iwe kuti uite chaizvo izvo. Iyo software yepamberi algorithm ichaongorora misika pamwe needu epamusoro emusika vaongorori uye ivo vanozoona yakanakisa nguva yekupinda nekubuda mumusika kuitira kuti vawane yakanyanya huwandu hwebatsiro inogoneka. Zvakare, uine 97% chaiyo chiyero, iwe uchave nerunyararo rwepfungwa uchiziva kuti yako mari ichave yakachengeteka kubva kune zvakakura kurasikirwa. Muchokwadi, angangoita ese emasaini ekutengeserana anozove anobatsira.
Chimwe chezvinhu zvakanakisa nezve The News Spy ndechekuti haufanire kunge uine ruzivo rwemberi mukutengesa misika yezvemari kuti uwane mari neiyo software. Sezvo software yacho yazara zvadzo, algorithm ichaongorora misika yako. Naizvozvo, hapana chikonzero chekupedza maawa asingaverengeke pamberi pekombuta yekombiki ichitarisa pamachati emitengo. Iyo algorithm inoenderera ichiongorora misika isiri-yekumira iyo inovimbisa kuti iwe usatombopotsa pane chero mikana yekutengesa. Chinhu chega chinodiwa kwauri iwe maminetsi mashoma pazuva kugadzirisa maparamendi ekutengesa uye kutarisa pane zvekutengesa software. Iyo algorithm ichaitira zvakasara iwe, ichikuwanisa iwe passive mari nekushingirira kushoma.
Zvakare, software yacho ndeye mahara zvachose. Izvi zvinoreva kuti hapana mari inobhadhariswa kunyoresa account nyowani. The News Spy haibhadharise mari yekuita mabasa uye haibhadharise makomisheni pane purofiti inowanikwa kubva mukutengesa. Pamusoro pezvo, haufanire kunetseka nezve chero mhosva dzakavanzika kubva ku The News Spy.
The News Spy yakavambwa naJohn Mayers, mutengesi anozivikanwa wecryptocurrency. Mayers vaida kugadzira otomatiki yekutengesa chikuva iyo yakapa simba vanhu vezuva nezuva kuti vaite purofiti kubva mukutengesa misika ye cryptocurrency. Akafungidzira software iyo kunyange vatengesi vevano pusa vaigona nyore kushandisa.
Mayers vakaunganidza timu yenyanzvi mune ruzivo rwemari, economics uye makomputa. Iri timu rine tarenda revanhu rakasanganisa makore avo ezviitiko uye hunyanzvi kugadzira imwe yeanobhadhara zvikuru ekutengesa zvikumbiro zviripo nhasi. Zvakare, kuitira kupa simba kuvanhu vazhinji sezvinobvira, vafunga kuburitsa software kune veruzhinji, zvachose mahara.
Iwewewo unogona kuwana rusununguko rwemari nekusaina izvozvi account yemahara.
TANGA KUPFUURA ZUVA NEZUVAxxxXX TODAY